Antso fanairan’ny vondrona jeneraly misotro ronono : « tsy zakan’ny vahoaka intsony izao! » | NewsMada
Antso fanairan’ny vondrona jeneraly misotro ronono : « tsy zakan’ny vahoaka intsony izao! »
Hanao ahoana ihany izao toe-draharaham-pirenena izao? Nanao antso fanairan’ny vondrona jeneraly misotro ronono: « Tsy zakan’ny vahoaka intsony izao! »
« Mahita izahay fa tsy zakan’ny vahoaka intsony izao. Miara-miaina amin’ny vahoaka aho, ary hitako izany olana izany. » Izay ny valin-tenin’ny jeneraly Andrianafidisoa, teny amin’ny La Rotonde, Besarety, omaly, momba ny fanambaran’ny vondrona jeneraly sy manamboninahitra misotro ronono momba ny toe-draharaham-pirenena.
« Tsy azo atao takalon’aina intsony ny vahoaka noho ny tsy fisian’ny fifampihainoana eo amin’ny fitantanana ny raharaha eto amin’ny firenena », hoy ny fanambaran’izy ireo, novakin’ny jeneraly Rakotondramanana René Daniel. Antsoiny ny tomponandraikitra isan-tokony mba hisoroka izay rehetra mety hampiditra ny firenena amin’ny krizy.
Mila mandray andraikitra tandrify azy ny tsirairay
Mba hametraka ho ambony ny tombontsoam-pirenena ny mpitondra sy mpisehatra ara-politika rehetra. Mba hisian’ny filaminana sy ny fitoniana eto amin’ny tany sy ny fanjakana izany, ka hanaja ny lalàmpanorenana sy hampanjaka ireo zo fototry ny olom-pirenena.
Mba hiaro ny vahoaka sy ny fananany ireo tomponandraikitry ny mpitandro filaminana. Tsy ho sanatria ho sakana ny fiarahamonina demokratika tan-dalàna manaja ny soatoavina maha Malagasy. « Miantso anareo zandry ao amin’ny Foloalindahy izahay, hisoroka ny tsy mety rehetra. Mba tsy hanasokajian’ny mpiray tanindrazana antsika ho herim-pamoretana izany », hoy izy ireo.
Miroso amin’ny disadisa lalina ny firenena
Ilaina ny fitoniana mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana. Hita tamin’ireny zava-niseho teny amin’ny Antenimierampirenena ireny fa miroso amin’ny disadisa lalina isika. Mihamarefo ny andrimpanjakana samihafa noho ny kolikoly, fanamparam-pahefana, tsy fanarahan-dalàna. Hizotra amim-pahamarinana sy an-kalalahana ve ny fifidianana, ary ho voahaja ny zo fototry ny olom-pirenena? Miaina ao anaty ahiahy sy tebiteby ny maro anisa.
Manantena fiovana izy ireo
Fanairana ny saina sy ny feon’ny fieritretan’ny rehetra manoloana ny zava-misy ny antso, handraisana andraikitra tandrify ny tena. Mifanaraka amin’ny lalàna sy ny sata ary ny fitsipika mifehy ny andrimpanjakana tsirairay avy izany. Tsy vitan’ny fitenenana fotsiny na fisitrahana fa mila maneho hevitra ny tena. Manantena fiovana izy ireo.
Nilaza tsy hidina an-dalambe na hanongam-panjakana izy ireo. « Rehefa misy ilan’ny Tanindrazana anay, tsy maintsy mijoro ho an’ny Tanindrazana izahay », hoy ihany izy ireo. Ny Foloalindahy sy ny mpitandro filaminana no tandroka aron’ny vozona ary fiarovana farany ho an’ny vahoaka sy ny firenena.